Ozil oo sheegay inuu kordhinayo heshiiska kooxdiisa Arsenal | Radio Himilo
Home / Habka-Nolosha / Ozil oo sheegay inuu kordhinayo heshiiska kooxdiisa Arsenal
Ozil oo sheegay inuu kordhinayo heshiiska kooxdiisa Arsenal
Posted by: radio himilo January 9, 2017
Muqdisho – Mezut Ozil ayaa xaqiijiyay inuu diyaar u yahay saxiixa heshiis hor leh inuu la galo kooxdiisa Arsenal haddii macalin Wenger ay dhaceyso inuu kula nagaado gegida Emirates ee magaalada London.
Sida horayba loo soo xigtay, Ozil ayaa ku faraxsan joogitaanka Gunners-ka, hayeeshe wuxuu doonaya inuu arko macalin Arsen Wenger oo laga saxiixo heshiis cusub kahor intuusan dhamaan heshiiskiisa bilo kadib.
Heshiiska Ozil ayaa ku eg sanadka 2018, balse sida Alex Sanchez waa inuu qalinka saaraa si uu heshiiskiisa kooxda uu kula joogo u kordhiyo – Hayeeshe Ozil ayaa kol hore kooxdiisa u sheegay inuu naawilayo joogitaanka waqooyiga London.
“Waan ku faraxsanahay joogitaankayga; waxaana diyaar u ahay inaan heshiis cusub saxiixo.” Ozil ayaa u sheegay Kicker. “Taageerayaashuna waxay sidoo kale doonayaan inan sii joogo.”
Wuxuu intaas kusii daray: “Kooxdu way la soctaa inaan halkan u imid baaqa iyo yeermada macalinkayga Wenger. Waa midka iga saxiixay heshiiska. Waana midka aan ka heysto kalsooni buuxda.”
Ozil ayaa kahor maqnaanshiyahiisa danbe, wuxuu sameynayay bandhig layaab leh isaga oo kooxda ka caawiyay goolal uu dhaliyay iyo kuwo uu caawiyay dhalashadooda.
Ozil wuxuu sidoo kale ku gacanseyray hadal uu yiri laacibkii hore ee kooxda Thiery Henry oo ahaa in isaga iyo Sanchez ay doonayaan in mushaharka loo kordhiyo haddii ay galaan heshiis hor leh.
“Qof kasta aragti ayuu leeyahay,” ayuu yiri Ozil. “Balse tani macno iima sameyneyso. Waan ogahay shaqadayda, Waana ogahay waxa igala dhaxeeya shaqadayda iyo kooxdayda.”
Labadan laacib ayaa kol hore lala xiriirinayay inay aadi doonaan horyaalka Shiinaha – halkaas oo mar horaba ay tageen laacibiin ka tagay horyaalka England PL.
Wenger, si kastaba, wuxuu sheegay inuusan niyad u heynin inuu iska iibiyo Ozil oo uu ku dadaalayo inuu kusii hayo gegida kooxda ee Emirates.
Previous: Ciidamada Muslimiinta Maraykanka oo loo ogolaaday deysiga garka
Next: Pogba, Neymar iyo Buffon kuma jiraan liiska 11 laacibka ee sanadka